Amagumbi abucala ama-2, akulungeleyo ukuphumla, indawo eGqwesileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStella
Yonwabela imfihlo yendlu yethu encanyathiselweyo enokufikelela ngokuzimeleyo, ezolileyo, kunye nokukhanya okuninzi. Kubandakanya amagumbi abucala ayi-2, igumbi lokuhlambela eli-1, ikhitshi elinezixhobo ezigcweleyo/ifriji/ indawo ebanzi yegunjana kunye ne-Wi-Fi yasimahla (ibhedi yokumkanikazi, ibhedi engamawele, kunye nebhedi yesofa)
Sithetha iSpanish nesiNgesi. yokupaka free 24/7. Indawo enye yokuqhuba okanye indawo yokupaka ezitalatweni. Indawo ilungile, kufutshane neSikhululo seenqwelomoya, ezantsi kwedolophu LA, CSUDH, San Pedro Port, kunye nenye yeevenkile ezinkulu eSouthern California del Amo mall.
Indawo yethu idityaniswe nendlu enkulu. Isandula ukulungiswa, inomgangatho ovulekileyo, igumbi lokuhlala elinetafile yokutyela. Ibonelela ngefriji, imicrowave, umenzi wekofu, izitya kunye nempahla.
I-Apartment ibucala ngokupheleleyo kwaye inomnyango wayo
Indawo yokuhlala inokuhlala abantu aba-6 ngokukhululeka. Ungabuza ukuhlalisa abantu abaninzi.
Ibandakanya inkonzo ye-tv ngqo kunye ne-wifi.
Indawo entle kwiintsapho, akukho ntlawulo yongezwayo kwiintsana.
Imitsalane emikhulu ekufutshane ibandakanya iDisneyland, ifama yamaqunube eKnotts, i-adventure yaseCalifornia, i-aquarium yasePasifiki kunye nezitudiyo zehlabathi.
Iilwandle ezininzi ngaphakathi kweemayile ezi-7 okanye ngaphantsi
4.59 · Izimvo eziyi-119
Ifakwe eCarson ecaleni kweTorrance, iRedondo Beach, iPalos verdes, ulwandle lwaseHermosa, ulwandle lwaseManhattan, iRedondo Beach Pier(ukubukela umnenga kunye nokuloba ngesikhephe, nalapho ufumana eyona marike yokutya yaselwandle igqwesileyo (ilobster ephilayo njl. njl. Kaninzi
Indawo yaseRiviera Village yaziwa kakhulu ngeendawo zokutyela, iivenkile ezincinci, iMarike yamafama, uJoe wabarhwebi kwaye ngokuqinisekileyo yimizuzu eli-10 ukuya kudederhu lweevenkile ezinkulu zeDel Amo, iithiyetha bhanyabhanya, iivenkile eziphezulu kunye neeresityu. Kuninzi ukukhetha
Imizuzu eyi-15 ukuya eHermosa Beach kunye neManhattan Beach Palos Verdes kunye nemizuzu engama-30 ukuya eVenice Beach kunye nomzuzu nje we-45 uqhubela kuNxweme ukuya eMalibu okanye eMzantsi ukuya kuLwandle olude lwaseHuntington njl.
Thatha ibhasi yaselwandle ukusuka eRiviera Village ukuya eHermosa Beach, Manhattan Beach, 30 min ukuya LAX. kwakhona 10 imizuzu ibhayisekile ukukhwela Torrance, beach ecocekileyo kakhulu iimbono ezintle kumgca Pacific Coast. Ukuba usesantini unokuzibona zonke iilwandle ukuya eSanta Monica!
Indawo yasekhaya enelanga!
Umbuki zindwendwe ngu- Stella
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ngayo nayiphi na imibuzo okanye ifonti.
Ndiyakuthanda ukuthetha uqinisekile ukuba uziva ukhululekile kwindawo.